Zeitgeist: Fehezo amin'ny solosainao ny zavatra ataonao | Avy amin'ny Linux
Famakiana amin'ny a olona, Nahita lahatsoratra iray nisy ny mpanoratra azy aho (ny namantsika Jako) manazava hoe inona izany Zeitgeist ary ny fomba hampiasantsika azy.
Zeitgeist dia lozisialy iray izay mitandrina ny fitahirizana firaketana an-tsoratra ny zavatra rehetra ataonao amin'ny PCInona avy ireo horonan-tsary na sary hitanao? Inona ireo hira nolalaovinao? Na mamela antsika hiditra amin'ireo antontan-taratasy nohamarininao, tranokala notsidihinao sns ...
Zeitgeist no fototry ny Sezen ohatra, fa ampiasao miaraka amin'izay Unity hahafahanao miditra amin'ireo fampahalalana rehetra ireo ary manolotra valiny tsara kokoa aminao rehefa mitady rindranasa sy rakitra avy amin'ny Dash anao. Androany aho mitondra fitaovana antsoina aminao Gazety Gnome Action izay mamela anao hijery ireo fampahalalana voasoratra anarana rehetra
3 Ny fandaharam-potoana
4 Famafana ny maody
5 Misoratra anarana amin'ireo tranonkala notsidihina
6 Ahoana ny fomba hamafana ny tantarako?
Raha hametraka ny Gnome Action Journal dia mila mametraka ilay fonosana fotsiny ianao gnome-activation-journal: Clic mametraka (raha mampiasa Ubuntu ianao), na avy amin'ny terminal dia ampiharo ity baiko ity:
Raha vao tafapetraka dia afaka mahita azy amin'ny anarana isika Rakitra fanaovana hetsika ao amin'ny rafitra. Ny zavatra tsara momba an'ity fitaovana ity dia ny fahitantsika ny zavatra rehetra nataontsika tamin'ny PC noraketin'i Zeitgeist amin'ny daty rehetra, afaka mihemotra na mandroso ara-potoana.
Izy io koa dia manana fanohanana aseho aloha sary, horonan-tsary, antontan-taratasy an-tsoratra tsotra sy antontan-taratasin'ny birao an'ny fenitra ODF (odt, odp, ods).
Izy io koa dia ahafahanao mijery ny fampahalalana amin'ny fomba fijery 3, izay hanova ny fomba fahitanao ny vaovao.
Ny fijery default dia Multiview izay ilay iray hita amin'ny sary roa voalohany amin'ity lahatsoratra ity, ny roa hafa dia nantsoina Thumbview (zoro thumbnail) y View Timeline (mampiseho ny fizotry ny andro mizara ora maro)
Eo amin'ny farany ambany dia ahitantsika ny tsipika manome fotoana ahafahantsika misafidy ny daty tiantsika hojerena
Famafana ny maody
Eo amin'ny ilany ankavanana isika dia mahita bokotra misy ny sarin'ny Zeitgeist izay mamela ny fidirana amin'ireo zavatra hafa mankany amin'ilay maody Fafao Mode, ao izay singa nofidintsika dia voafafa tamin'ny tantara.
Misoratra anarana amin'ireo tranonkala notsidihina
Nisy fotoana nampiasako solomaso Unity izany dia avela amin'ny Dash karohy fitetezana tantara sy tranonkala tianao indrindra, saingy tsy maintsy nametraka plugin ianao Zietgeist for Firefox, amin'izay mba Firefox hampahafantatra Zeitgeist amin'ireo tranonkala notsidihiny.
Androany dia tsy mampiasa an'io solomaso io intsony aho fa hitako fa misy ny angon-drakitra an-tranonkala notsidihiko tamin'izany andro izany, nitranga tamiko koa izany tamin'ny addon hafa iray ho an'ny Thunderbird, ity farany nesoriko avy hatrany satria nahatonga ahy hampitombo ilay fampirimana Thunderbird amin'ny gig maromaro.
Raha izany dia hitako amin'ity fitaovana ity ny fampahalalana rehetra voasoratra anarana hatramin'ny nametrahako ny Ubuntu 12.10Heveriko fa maro no mahita fa mahasoa ny fikarohana antontan-taratasy taloha na noho ny fahalianana te hahafantatra fotsiny ny tantarany.
Ahoana ny fomba hamafana ny tantarako?
Azo antoka fa maro no manontany tena amin'ny tenany, tsara, Ubuntu mitondra safidy manokana izay mamela anao hamafa ny rehetra na ny ampahany amin'ny tantarantsika, ho fanampin'ny fahafahanao manondro fa tsy tadiavinay ho voatahiry ny rakitsoratry ny zavatra rehetra ataontsika na manondro ohatra fa tsy mirakitra ireo horonantsary izay hitako na tsy manoratra izay ataovy amin'ny programa manokana, ireo safidy ireo dia ao amin'ny Fikirana rafitra »Tsiambaratelo
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Zeitgeist: Fehezo amin'ny solosainao ny zavatra ataonao
Wao!… Toy ny polisy cyber eto an-toerana… HAHAHA 😉
Azo foanana ve ary ahoana?
Miala tsiny fa an'i Elav ny fanontaniana.
Tsy hanana zavatra toa izany ve izy ireo ao amin'ny KDE? ary sendra keylogger. 🙁
akonadi sy nepomuk
Osdaeg dia hoy izy:
akonadi sy nepomuk dia tsy tokony hanoratra izay ataonao amin'ny PC
Mamaly an'i Osdaeg
Misy maha samy hafa an'io sy ny tracker amin'ny gnome? Tsy dia fantatro ny fahasamihafan'izy ireo, efa nampiasa zeitgeist aho taloha niaraka tamin'ny synaps, fa tato ho ato ao amin'ny shell-gnome sy ny tracker dia tsy ilaina izany. Sa tetik'asa duplicate ve?
Ka izany no antony, nanome olana ahy indray mandeha tamin'ny fampiasana Ubuntu, tampoka teo dia niadana ny solosaina ary nihazakazaka ny mpankafy, nijery ilay tompon'andraikitra aho ary io ilay Zeitgeist ity, maharitra iray minitra fotsiny nefa toa hafahafa ilay izy. Rehefa afaka volana vitsivitsy dia niverina tany Ubuntu aho ary tsy nanome ahy olana intsony.
Efa nandao an'i Debian ve ianao, Elav?
Whatee? Amin'ny fomba ahoana?
Ubuntu, GNU / Linux be mpampiasa sy be mpampiasa, dia nametraka kaody mpiambina. Rehefa mitady ny rakitra ao an-toerana ho an'ny tadiny ny mpampiasa, mampiasa ny birao Ubuntu; Ubuntu dia mandefa izany tady izany amin'ny iray amin'ireo mpizara Canonical. (Canonical no orinasa mamorona Ubuntu).
Io dia mitovy amin'ny fampiharana fanaraha-maso voalohany, izay hitanay tao amin'ny Windows. Nilaza tamiko ny namako farany Fravia fa rehefa nitady kofehin-drakitra tao amin'ny rafitra Windows izy dia nandefa fonosana ho an'ny mpizara hafa, izay hitan'ny firewall. Tao an-tsaina izany dia nianatra momba ny fironana amin'ny rindrambaiko manana "malaza" ho malware izy. Angamba tsy kisendrasendra ny nandefasan'i Ubuntu vaovao mitovy. Richard Stallman.
Ry tompokolahy, mihataka amin'ny etika tena izy amin'ny rindrambaiko maimaimpoana isika ary miha OpenSource hatrany, aiza ny tsiambaratelon'ny mpampiasa?
DIANA ROSALBA PUJOL CHERREZ dia hoy izy:
Ampidiro ny log d'activité fa rehefa mandeha aho dia tsy mandeha izy, tsy misokatra izy io, ary manjavona ilay sary famantarana mpandefa.
Valio amin'i DIANA ROSALBA PUJOL CHERREZ
Nitrux - fonosana kisary tsara tarehy